जेठ ९ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ राशिफल/जेठ ९ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
जेठ ९ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
लामो अवधिको आर्थिक योजनाको लागि अनुकूल दिन रहेको छ। आर्थिक र व्यावसायिक दृष्टिले दिन लाभदायक रहेको छ । शारीरिक र मानसिक स्फूर्ति र ताजगी अनुभव गर्नुहुनेछ। मित्र र आफन्तको तर्फबाट उपहार मिल्नेछ।
बोलीको जादूले कसैबाट लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। बोलीको कोमलताले नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ। शुभकार्य गर्न प्रेरणा मिल्नेछ। पठन- लेखन जस्ता साहित्यिक प्रवृत्तिमा अभिरुचि बढ्नेछ। परिश्रमको अपेक्षित परिणाम मिल्दा पनि काममा तत्परता र कुशलता प्रगतिको सहायक हुनेछ।
दुविधामा अल्झिदा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्नुहुने छैन। वैचारिक स्थितीले मानसिक अस्वस्थता अनुभव गर्नुहुनेछ। अत्यधिक भावनाशीलताले दृढता कमजोर गर्नेछ। पानी तथा अन्य तरल पदार्थबाट सावधान रहनुहोला। परिवार वा जमीनसँग सम्बन्धित मामिलाको चर्चालाई टाल्नुहोला।
शारीरिक र मानसिक ताजगीको साथसाथै घरमा आनन्दमय वातावरण रहनेछ। आफन्त एवम् साथीसँग भेट हुनेछ। शुभ कार्य आरम्भ गर्नको लागि अनुकूल दिन रहेको छ। कार्य सफलता र प्रिय व्यक्तिसँग हुनाले दिन आनन्द रहनेछ। आर्थिक लाभ र भाग्य वृद्धि होला।
पारिवारिक सदस्यसँग सुख-शान्तिमा दिन बिताउनुहुनेछ। स्त्री मित्रबाट विशेष मदत्त प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रभावशाली बोलिले अरु मान्छेको ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ। आयको अपेक्षा खर्च अधिक हुनेछ। उत्तम भोजन प्राप्त हुनेछ। निर्धारित कार्यमा कम सफलता मिल्नेछ ।
लाभदायक दिन हुनाले वैचारिक समृद्धि बढ्नेछ। मिठो बोलीले लाभप्रद सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्न सक्नुहुनेछ। उत्तम भोजन, उपहार र कपडा प्राप्त हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता बनिरहनेछ। जीवनसाथीसँग निकटता बढ्नेछ ।
तपाईलाई अनैतिक व्यवहारले समस्यामा पार्नेछ। दुर्घटनाबाट बच्नुहोला। बोलिको शिथिलताले झगडा हुने सक्ला। आफन्तसँग पनि अनबन होला। मनोरंजन वा घुमफिरमा खर्च हुन् सक्ला। शारीरिक, मानसिक व्यग्रता कम गर्नको लागि आध्यात्मिकता सहायक साबित हुनेछ।
जागिर वा व्यवसायमा लाभ हुनेछ। मित्रसँग भेट हुनेछ। विवाहोत्सुक युवक-युवतिको बिहे हुन् सक्ने सम्भावना रहेको छ। छोरा र पत्नीबाट लाभ हुनेछ। वृद्ध र बुढा व्यक्तिहरू तपाईंको फाइदाको लागि उपकरण बन्नेछन्। प्रियजन र साथीहरूबाट उपहार प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईको दिन शुभ फल प्रदान गर्ने खालको रहेको छ। घरायसी जीवनमा आनन्द छाईरहनेछ। प्रत्येक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछैन। उच्च अधिकारी तपाईप्रति प्रसन्न रहनेछन्। पिता र अभिभावकबाट लाभ होला। व्यावसायिक क्षेत्रमा भ्रमण हुन सक्नेछ। कार्यभार वृद्धि हुनेछ।
तपाईको लागि दिन अनुकूल र प्रतिकूल मिश्रित फलदायी रहनेछ। बौद्धिक कार्य र व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ विचारबाट प्रभावित रहनुहुनेछ र त्यसलाई अपनाउनु हुनेछ। सिर्जनात्मक क्षेत्रमा सिर्जनशक्तिको पनि परिचय दिनुहुनेछ। तरपनि मानसिक रुपले स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछैन।
अनैतिक कृत्यबाट टाढा रहनुहोला। बोलीमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु वा घटनालाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुहोला। अधिक खर्च हुन् सक्ला । आर्थिक समस्या हुने सक्ने सम्भावना रहेको छ। शारिरिक र मानसिक रूप अस्वस्थ रहनुहुनेछ ।
दैनिक कार्यलाई छोडेर घुमफिर र मनोरंजन प्रवृत्तिको लागी समय निकाल्नु हुनेछ। परिवार र मित्र पनि समावेश हुनेछन्। शारीरिक र मानसिक रूपले दिनभर प्रफुल्लित रहनुहुनेछ। प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ।
शुभ प्रभात पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, भाद्र २१ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल